Free Nay Phone Latt: နေဘုန်းလတ်နှင့် တစ်လအကွာ (အထူးပို့စ် ၂)
နေဘုန်းလတ်နှင့် တစ်လအကွာ (အထူးပို့စ် ၂)
ဖမ်းဆီးခံထားရသည်မှာ တစ်လတိတိကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော နေဘုန်းလတ်အတွက် ရင်းနှီးသူများမှ ပေးပို့သော ခံစားချက်များ၊ ဆုတောင်းများကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဆက်လက်ပေးပို့လျက်ရှိသော စာများကို ဤပို့စ်တွင် ဖြည့်စွက်ဖေါ်ပြပေးသွားပါမည်။ ပေးပို့လိုသူများအနေဖြင့် comment ရေးသား၍ဖြစ်စေ၊ admin.free.npl@gmail.com သို့ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ကျနော့် အသက် 23 ရှိ ပြီ ကျနော့် ဘ၀ သက်တမ်း တလျှောက် လုံး ကျနော် နဲ့ တူတူ နေလာတဲ့ အကို။ကျနော့် အကို ဟာတသက်လုံးဘာမှမဟုတ်တာ မလုပ် ခဲ့ ပါဘူး ဘယ်သူ.ကို မှ ဒုက္ခ မပေးခဲ့ ပါဘူးဗျာ ခုတော.ဗျာ ဘယ်လိုလူတွေ ကများ သူ. ကို ဒုက္ခ ပေးနေကြတာလဲဗျာ................
“သံလွင်အိပ်မက်တွေကို တို့တတွေဆက်မက်ကြမယ်... ဒဏ်ရာတွေဟာ ငါတို့ အတွက် အားမာန်တွေ ဖြစ်စေရမယ်...ဒါပေမယ့် နာကြည်းမှုတွေတော့မဟုတ်ဘူး..အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်သည်းခံစိတ်တွေနဲ့ မြန်မာပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ရှေးရှုပြီး ခရီးတွေဆက်ချီတက်မယ်...လွတ်သင့်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်မှာ မင်းပြန်ရောက်လာဖို့ ငါတို့ မျှော်လင့်နေတယ်..”
နေဘုန်းလတ်ရေ...ငါတို့ဟာ ဘယ်အရာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အတူတူတွဲပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ မဟုတ်လား။ အခုလောလောဆယ်လည်း မင်းနဲ့ တူတူမရှိနေနိုင်ပေမယ့် ငါ့စိတ်ထဲမှာတော့ မင်းကို အမြဲရှိနေပါတယ်။ တောင့်ထားသူငယ်ချင်း . . .တောင့်ထား..... အဲဒီနေရိပ်တွေ လာမယ့်တစ်နေ့ကို.....
ဘာမှ မကြာလိုက်ဘူးထင်ရပေမယ့် ငါတို့ မင်းဘလော့ဂ်ပို့စ်အသစ်တွေ မဖတ်ရတာ တစ်လကြာခဲ့ပြီ။ မင်းအတွက် လုပ်ပေးနိုင်မယ်ထင်တာတွေကို လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိ ဘယ်လိုအတားအဆီးတွေ့တွေ့ နောက်မဆုတ်တမ်းလုပ်ပေးသွားမယ်။ မင်းနဲ့ ငါတို့ ပြန်ဆုံတဲ့အခါ .. ငါတို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ ဒီလို အိပ်မက်ဆိုးတွေ နောက်ဘယ်တော့မှ မကြုံတွေ့ရအောင် ငါတို့ အတူကြိုးစားကြမယ် သူငယ်ချင်း..။ မကြာခင်ကာလမှာပဲ မင်းရဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေ အဖြစ် အသွင်ပြောင်းနိုင်မယ့်နေ့ ရောက်မယ်လို့ ငါယုံကြည်ထားလိုက်မယ်။
ထမင်းစားလို့ မင်းမသိတဲ့ဟင်း မစားဘူးတဲ့ဟင်းဆိုရင် နမ်းကြည့်တယ်.. နောက်ပြီး “ငါ့အဘိုးက အဲလိုနမ်းကြည့်ရင် ခွေးတွေကပဲ မစားခင် နမ်းကြည့်တာလို့ “ ရယ်မောပြီး မင်းပြောခဲ့တယ်..
အခုရော ထောင်ထဲမှာ ထောင်ထမင်းထောင်ထမင်းကို မင်းဘယ်လိုစားနေမလဲ..
အပြစ်ရှိတဲ့လူတိုင်း အရေးယူမခံရသလို အရေးယူခံရတဲ့လူတိုင်းကလည်း အပြစ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ အပြစ်ကင်းလို့ အရေးယူခံထားရတာ ... ကိုနေဘုန်းလတ် ... အစ်ကိုပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ အစ်ကို နှစ်သက်တဲ့ မိသားစုထမင်းဝိုင်း၊ အစ်ကို တောင့်တတဲ့ ဘလော့ဂါစကားဝိုင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေ မကြာခင် ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါစေလို့ အလေးအနက်ဆုတောင်းတယ်။
နေဘုန်းလတ်ရေ မင်းဘလော့ကမ္ဘာကနေ ဝေးနေရတာ ဒီနေ့ဆို ၁ လပြည့်ပြီပေါ့။ ငါတို့ မင်းကိုမမေ့ဘူး။ ငါတို့ မကျေနပ်ဘူး။ မတရားမှုတွေ မကြာခင်ကွယ်ပျောက်တဲ့ နေ့သစ်ကို ရောက်ကိုရောက်လာရမှာပါ။ မင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုသာမက ငါတို့လိုလားတဲ့ အားလုံးရဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေဆီကို တို့တွေ မမေ့မလျော့ ခရီးဆက်နေကြဆဲပါ။
ခင်ဗျား ဟောဒီ တစ်လကို ဘယ်လိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်.။ ခင်ဗျားအကြောင်း စဉ်းစားတိုင်း အဲ့ဒီ စနစ်ဆိုး ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကို ပဲ ထိုင်ထိုင်ဆဲနေမိတယ်။ အမှန်တရားတွေက မြေသြဇာမကောင်းတဲ့ နယ်မြေမှာ ယက်ကန်ယက်ကန် နဲ့ ရှင်သန်နေရတယ်။ ခင်ဗျား ထိုးဖောက်ထွက်လာမယ်ဆိုတာ ကိုတော့ ယုံကြည်တယ်..။ အဲ့ဒီ နေ့ကို စောင့်နေမယ်..။
lone wa sate ma kg bu!
i'm still angry on the f*cking government
well he is one of the pioneer of the burmese blogger community
and he also did alot for the unity of burmese blogger community
so all the bloggers should pay tribute to him
နေဘုန်းလတ် နင်ဖမ်းခံရတာ ဘာလိုလိုနဲ့တစ်လပြည့်တော့မယ်။ ငါတို့ လို အပြင်မှာနေနေရတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ တစ်လဆိုတာ ဘာမှမကြာရှည်လိုက်တဲ့ အချိန်ပေမဲ့နင့်လို ဒီအာဏာရှင်စစ်ဘီလူးတွေရဲ့ငရဲတိုက်မှာနေနေရတဲ့ သူအတွက်ကတော့ တစ်လဟာ တစ်ကမ္ဘာလောက်ကြာရှည်မယ်ဆိုတာ နင်လာမပြောပေမဲ့ငါတို့ သိနေပါတယ် သူငယ်ချင်း...နင်တစ်ယောက်အမြန်ဆုံးဒီငရဲခန်းကလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းနေပါတယ်..
Nay Phone Lat, we are proud of having u. Be strong. we are never give up.Let's fight to get freedom for Burma....
နေဘုန်းလတ်ဟာ ပန်းပျိုးတဲ့လက်လား။ အဆိပ်ခွက်လားတဲ့။
အမေရေ အမေသားဟာ ဥယျာဉ်မှူးပါ်။ အမေ့သားလို လူငယ်များ ရာထောင်သောင်းမက ပေါ်ပေါက်ဦးမှာပါ။ အမေလိုဂုဏ်ယူတတ်တဲ့အမေမျိုးတွေဟာ ကျနော်တို့သားတွေ အတွက် အကြီးအမားဆုံးသောအားပါ။ အမေရင်ကဖြစ်တဲ့သား အမေရင်ကို အမြန်ဆုံးပြန် ရောက်ပါစေသား။
Nay Phone Latt.. We are sorry for you but you are in the history now. Show the whole world.. how strong you are and what you are made of. We will keep fighting until the real freedom comes to our people of Burma. asaparent ofalittle boy, we pray for all of you to reunite with your family soon.
Ko Nay Lin & Ma Moe (USA)
ကိုကျော်ရေ...အမှန်တရားတွေ ခေါင်းငုံ့နေရတဲ့ လက်ရှိကာလမှာ ကြုံလာသမျှကို ကြံ့ကြံ့ခံ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရုံကလွဲပြီး တခြားမရှိတော့ပါဘူး။ အကိုရေးခဲ့ဖူးတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကဗျာလေးထဲကလို ဘောလုံးကွင်းထဲက ရည်မှန်းချက်တူတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက အကို့ကို မျှော်နေကြပါတယ်။ အကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခွင့် ရပါစေ။
ခင်ဗျားကို တကယ် ချစ်တတ်သူတွေ များပါစေကွာ။
နေဘုန်းလတ်နဲ့ တစ်လအကွာတဲ့လား.. ဟင့်အင်းးး.. တစ်ရက်မှ မကွာပါဘူးလေ.. ငါတို့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ စိတ်ထဲ နင် အမြဲ မကွဲမကွာ ရှိနေပါတယ် သူငယ်ချင်း.. လူမှန် နေရာမှန် အမြန်ရောက်ပါစေ.. ပြည်သူပေးတဲ့ နာမည်၊ နေရာကိုပဲ လူတွေက အဓိက သတ်မှတ်တာပါကွာ.. ဒေါ်စံရှားတင် ပြောသလိုပေါ့.. ပြည်သူပေးတဲ့အကယ်ဒမီ သန်းပေါင်းများစွာ ရပြီးမှတော့ အရုပ်ကို မမက်ဘူးတဲ့..
နေဘုန်းလတ်နဲ့ တလအကွာတဲ့လား.. ဟင့်အင်းးး.. တစ်ရက်မှ မကွာပါဘူးလေ.. ငါတို့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ စိတ်ထဲ နင် အမြဲ မကွဲမကွာ ရှိနေပါတယ် သူငယ်ချင်း.. လူမှန် နေရာမှန် အမြန်ရောက်ပါစေ.. ပြည်သူပေးတဲ့ နာမည်၊ နေရာကိုပဲ လူတွေက အဓိက သတ်မှတ်တာပါကွာ.. ဒေါ်စံရှားတင် ပြောသလိုပေါ့.. ပြည်သူပေးတဲ့အကယ်ဒမီ သန်းပေါင်းများစွာ ရပြီးမှတော့ အရုပ်ကို မမက်ဘူးတဲ့..
နေဘုန်းလတ် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း တစ်လပြည့် အထူးပို့စ် (၁...
နေဘုန်းလတ် ကဗျာများ (၁)
နေဘုန်းလတ်အတွက် အဒေါ်ဖြစ်သူထံမှ ပေးစာ
သား နေဘုန်းလတ် အတွက် အမေ့စာ
နေဘုန်းလတ်ကို ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်ရပြီ
နေဘုန်းလတ် ကိုယ်တိုင်ရေးသော ကဗျာတစ်ပုဒ်
ကျွန်တော်တို့ လွှတ်မချနိုင်တဲ့ မြို့တော်သို့ အ၀င်
ကူညီတတ်သော နေမျိုးကျော် (ခ) နေဘုန်းလတ် အတွက် အဖေ့ေ...
ကမ္ဘာတလွှား နေဘုန်းလတ် သတင်းများ
အပြစ်မဲ့ ဘလော့ဂါ စာရေးဆရာ တစ်ဦး ညစ်တွန်းတွန်းပြီး...
နေဘုန်းလတ်အတွက် ဘလော့ဂါများ စုပေါင်းစာရေးသား
နေဘုန်းလတ် မမေ့တဲ့ ရက်စွဲနဲ့ ကဗျာ
Arrest of Burmese Blogger (VOA Burmese)
နေဘုန်းလတ်ကို ပုဒ်မ ၅(ည) ဖြင့် တရားစွဲပြီ